Oromiyaa: Jumiyaan daa'imman Qaaqee badhaasuuf - BBC News Afaan Oromoo
Oromiyaa: Jumiyaan daa'imman Qaaqee badhaasuuf
Miidiyaalee hawaasummaarratti suurri daa'ima akka hoogganaa biyyaatti osoo ibsa kennuu, daa'imman biroo gaazexessitoota oduuf maayikii shoonkoraa itti qabaniifi kanneen eegdoota qawwee mukarraa hojjetaneen marfamuun ka'an namoota baayyeen qoqqoodamaa ture.
Namoonni baayyeen dinqiisiifannaa kalaqaa fi hawwii daa'imman kanneeniif qaban ibsataniiru. Dubbichi kana qofaan hindhaabannee.
Ergaan daa'imman kunneen suurichaan dabarsuu yaalan Itoophiyaa bira darbuun biyyoota ollaa kan akka keeniyaa fi kan biroo keessattis dinqisiifannaa argateera.
''Jijjiiraamni dhufe akka itti fufu ni deeggarra''
Haaluma kanaanis Keeniyaatti Kaampaaniin omishaalee garaagaraa onlaayiniin gurguruu fi Jumiyaa jedhamuun beekamus, ijoollee kana badhaasuu akka fedhu beeksiseera.
Hoogganaan kominikeeshinii damee miidiyaa hawaasumma dhaabbatichaa Beenzitoonii Abdeslaam sagantaa ''back to school'' jedhamu biyyoota baha Afrikaa keessatti eegalaniin, daa'imman carraa barnootaa hin argannee fi dandeettii kalaqaa qaban akka jajjeebeessan himan.
''Gareen miidiyaa hawaasummaa Jumia, suurota daa'imanii originaala ta'eenii fi yaada waa kalaquu calaqqisan barbaadaa oolan tasa suura daa'imman kanaan bahan'' jedhu Beenzitooniin.
''Ijoollee suura sanirra jiran meeshaalee barnootaa fi baasii barnootaa hanga tokko badhaasaan kenninee jajjabeessuu barbaanna'' jedhan.
Image copyright Jumia
Suurri daa'imman kanaa dandeettii waa kalaquu isaanii waan mul'isuufi haalli itti yaadasaan qindeessan hubannaa haala addunyaan itti jirturratti qaban mul'isas jedhan.
''Yaroo suura sana arginu haala itti eegdonni hoogganaa miidiyaaleef ibsa kennaa jiru eeganiifi miidiyaaleen argaman suun waan dhugaa lafa jiru agarsiisa. kalaqa isaanii kanaaf galateefachuu barbaanna.'' Abjuu dhugoomii danda'u ta'uusaatu nutti toes jedhan.
Suura ijoollee kanaa erga fuula feesbuukii dhaabbatichaarratti maxxanfamee booda lammiileen keeniya hedduun qooddatanii dinqisiifachaa jiraachuus nutti himan.
''Ijoollee kana yoo argannee jenne barana ijoollee badhaasa isa jalqabaa kenninuuf ta'u'' jedhaniiru.
Ijoolleen sun eessa jiru?
Miidiyaalee hawaasummaarratti namoonni hedduun suurri kun eessatti akka ka'eefi ijoollen sun eessa akka jiran gaafachaa turanii boodas Wallaga lixaa magaala qaaqee akka ta'an beekameera.
''Sanbata torbee darbee osoon mana amantaatii bahee gara manaa deemuun ijoollee waan kan shaakalaa jiranitti dhufee suura kaasee'' nuun jedhe jiraataa magaalaa Qaaqee kan ta'e dargaggoo Toleera Qan'aa.
Waan ofii hojjetan malee namni jabaan akka san godhan gorsaa ture hin turre anis hin suuruma fudhadheen darbe malee hin gorsinee jedha.
Battalan suura sana kaasetti hikni waan hojjechaa jiranii maal akka ta'e hin gaafanne, daa'imni osoo ibsa kennuu mul'atu sun hoogganaa biyyaa ta'uu akka barbaadu garuu natti himeeraa jedhe.
Suurri kaase sana guyyoota muraas dura fuula feesbuukiisaarratti maxxansus hangan namoota hedduun qoodamee dinqisifatama jedhee akka hin yaadnes nutti himeera.
Wal'aansoo jireenya daandiirraafi kalaqa kophee ribuu - shamarree Masarat Faxxenee
Barattoonni Meeksikoo jaakkeettii elektiriikii haleellaa namarraa ittisu kalaqan
Ijoollee lafeefi sibiila gatame irraa doqdoqqee hojjatan wal baraa
'Lafuma Oromoorratti, Oromootu fiige'
Har'a Dirreedhawaatti maaltu ta'e?
'Itiyoo-telekoom cinaatti dhaabbilee lamaaf hayyamni kennamuuf jira'
Namtichi bishaan jalatti gaaffii gaa'elaa dhiyeessaa ture lubbuu dhabe
Guyyaa daandiiwwan konkolaataarraa bilisa itti tahanitti maaltu ta'a?
Hordoftoonnni amantii Ortodoksii naannoo Amaaraa hiriira ba'an
Namichi 'shiftoota' galanaarraan waggootaaf uggurame bilisa bahe
UN waamicha nageenyaa gareen 'Houthi' dhiyeesse deggere